နိုင်ငံတကာသတင်း Archives - Page 23 of 28 - YomaLan
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာသာတရား တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးလို့လက်ဘနွန်နိုင်ငံ စာရေးဆရာမ ဘာကြောင့် ပြောရတာလဲ?
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘာသာတရား တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးလို့ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ စာရေးဆရာမက ပြောခဲ့ပါတယ်.. သူ ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲ? (အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့စာလေးမို့ ဆုံးအောင်ဖတ်စေချင်ပါတယ်) “ငါဘုရားရဲ့ တရားတွေကို တွေးကြံနိုင်စွမ်းရှိသူတွေပဲ သိနိုင်မယ်” …
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှမှ အင်္ဂလိပ်လို ထုတ်ဝေသည့် နာမည်ကြီး သတင်းစာ တစ်စောင်ဖြစ်သည့် The Daily Star တွင် Who is supplying weapons …
တရုတ်တွင် လိင်ဆက်ဆံဖော်အရုပ်များ စတင်ငှားရမ်း၊ အိမ်အရောက်ပို့ပေးနေပြီ
တရုတ်နိုင်ငံ ဘေကျင်းမြို့မှာ အခြားသူတွေနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော်အရုပ်တွေကို Ta Qu ကုမ္ပဏီကနေ စတင် စမ်းသပ်ငှားရမ်းနေပြီလို့ ရှန်ဟိုင်းရစ်သတင်းမှာ စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားပါတယ်။ …
အင်တာနက်လိုင်းပေးမသုံးလို့ဆိုကာ အလယ်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦးမှ မိခင်ကို ဓားနဲ့ခုတ်
အင်တာနက်လိုင်းပေးမသုံးလို့ဆိုကာ အလယ်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦးက မိခင်ဖြစ်သူကို ဓါးနဲ့ခုတ်ရမ်းခဲ့လို့ မိခင်မှာ ဓါးချက်ဒဏ် ရာတွေများစွာနဲ့ ဆေးရုံအရေးပေါ်တင်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တရုတ် သတင်းဌာနတွေရဲ့ သတင်းရေး သားဖော်ပြချက်ထဲမှာဆိုရင် အဆိုပါ …
လူသတ် သွေးသောက်ခဲ့သည့် သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်လူသတ်သမား အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်တော့မည်
လူတဦးကို ဓားနဲ့ ၆၆ ကြိမ်ထိုးသတ်ပြီး သေသူရဲ့သွေးတွေကို သောက်ခဲ့တဲ့ သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်လူသတ်သမား အကျဉ်းထောင်က လွတ်မြောက်တော့မယ်လို့ မေရာသတင်းမှာ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က ဖော်ပြထားပါတယ်။ …
နျူကလီးယားစီမံကိန်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ပြီး အမေရိကန်နှင့် စစ်ရေးဟန်ချက်ညီရန် ထိန်းသွားမည်ဟု မြောက်ကိုရီးယား ကတိပြု
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအွန်က ပြုံယမ်း၏နျူကလီးယား စီမံကိန်း ပြီးစီးအောင် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ကတိပြုခဲ့ချိန်တွင် မြောက်ကိုရီးယားသည် အမေရိကန်နှင့် စစ်ရေးဟန်ချက် ထိန်းသွားရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု စက်တင်ဘာ ၁၆ …
ဇနီးအယောက် ၁၂၀ ရှိ ထိုင်း ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး လူမှုကွန်ရက်တွင် နာမည်ကြီးနေ
ဇနီး အယောက် ၁၂၀ ရှိပြီး သားသမီး ၂၈ ဦးရှိတဲ့ ထိုင်းအမျိုးသားတယောက်အကြောင်း ခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်း ထိုင်းသတင်းမီဒီယာနဲ့ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ နာမည်ကြီးနေပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း နခွန်းနာယုဒ်ခရိုင် …
အင်္ဂလန်က ရိုဟင်ညာ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်း ရှားလော့ဟုမ်း လို ဖွင့်ချ
အင်္ဂလန်က ရိုဟင်ညာ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်း ရှားလော့ဟုမ်း လို ဖွင့်ချပြဦးမယ်… ဘင်္ဂလားဒေ့ မှ ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများ၊ ပါကစ္စတန်များ၊ အိန္ဒိယလူမျိုးများဟာ မိမိ …
နိရဉ္စရာ၊ စက်တင်ဘာ ၁၆ ယခုလက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပြသနာမှာ မြန်မာပြည်တွင်းရေးသာ ဖြစ်ပြီး ပြည်ပမှ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို ဆန့်ကျင်ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံက …
ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူတစ်ဦးဟာ ပြည်နယ်တစ်ခုမှဆင်းရဲချိူ့ တဲ့ နေကြသည့် မိသားစုများနေ ထိုင်နိုင် ရန်အိမ်များဆောက် လုပ်ပေးမည့် ပရဟိတရန်ပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက် သူမရဲ့အပျိူစင်ညကို …